Weeraryahanka Paris Saint-Germain ee Edinson Cavani oo heshiis la gaaray koox cusub – Gool FM
(Paris) 18 Agoosto 2019. Weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain ee Edinson Cavani ayaa la soo warinayaa inuu ogolaaday heshiis saddex sanadood ah oo uu ugu biirayo naadiga Inter Miami.
Xiddiga xulka qaranka Uruguay ayaa hdaliyey 194 gool 281 kulan oo uu u saftay PSG tan iyo markii uu u soo dhaqaaqay caasimadda Faransiiska isla markaana uu kaga yimid naadiga reer Talyaani ee Napoli sanadkii 2013-kii.
Cavani ayaa heshiiskiisa haatan ee Paris waxa uu dhacayaa xagaaga soo socda, Jariiradda Gazzetta dello Sport ayaa warinaya in kooxda Inter Miami ay gacanta ku dhigtay saxiixa 32 sano jirkaan, isla markaana uu ogolaaday inuu u saxiixo heshiis saddex sanadood ah.
Kooxda cusub ee David Beckham oo aan weli ku dhawaaqin tababare ayaa la filayaa inay ka qeyb qaataan markoodii ugu horreysay ee horyaalka MLS-ka Mareykanka xilli ciyaareed 2020.
Cavani wuxuu xirfaddiisa ciyaareed ka bilaabay Naadiga Danubio ee ka dhisan waddankiisa hooyo ka hor inta uusan ku biirin Palermo sanadkii 2007, isla markaana u soo dhaqaaqin Napoli xagaagii 2010-kii.
Marka laga soo tago inuu ku riyaaqay rikoor cajiib ah heerkiisa kooxeed, Weeraryahankan qibradda leh ayaa sidoo kale 48 gool dhaliyay 114 kulan uu u saftay xulka qaranka Uruguay.